🥇 Inkqubo yezifundo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 926
Ividiyo yenkqubo yezifundo
Cwangcisa inkqubo yezifundo
Yeka ukukhangela inkqubo efanelekileyo yeekhosi zakho! Ifunyenwe apha kwaye ngoku, kweli phepha. Inkqubo yobalo lwezifundo ezivela kwi-USU iya kunceda ukwenza umbutho wakho uzenzele, iya kukuvumela ukuba ujonge imisebenzi eqhubekayo kunye neendlela zokulawula ishishini lakho. Kwaye, ewe, iya kunika amathuba amatsha kulawulo lwemveliso kulawulo lwakho. Okokuqala, inkqubo yethu yezifundo yenziwe ngabantu eza kusetyenziswa ngabantu. Sixolele i-tautology, kodwa kufanelekile apha, kuba kugxininiso eluntwini. Kuphela ngumbulelo wethu kubantu abazinikele ekufundiseni abanye abasityhalele ekwenzeni inkqubo eyodwa, eyona njongo ikukuququzelela umsebenzi wakho wemihla ngemihla. Kodwa kufanelekile ukuthi le njongo intle kangaka ineebhonasi ezintle kunye nemisebenzi emangalisayo eziyimfuneko ngoku. Ngexesha lenyanga yokuqala uyakumangaliswa yindlela esebenza ngayo inkqubo yezifundo kunye nokuba iququzelela kangakanani ukulawulwa kweshishini lakho. Kwaye kukukhuthaza kangakanani, njengomphathi, kunye nabasebenzi ngaxeshanye! Ukuvavanya ukuba iphelele kangakanani, sicebisa ukuba wehle ngezantsi kweli phepha kwaye ucofe ikhonkco elisebenzayo kuhlobo lwedemo lwenkqubo yezifundo. Inika iinkcukacha eziphambili, kwaye ixabiso lombuzo aluyonto. Ukufakwa kwenguqulelo yedemo yenkqubo yolawulo kuhlawulelwa ngokupheleleyo. Ukuba uhamba ngokusebenza ngokufutshane, singathanda ukuthi imisebenzi ihanjiswe phakathi kwabasebenzisi ngumlawuli. Njengoko sele uqikelele, umlawuli ungumphathi okanye usekela wakhe okanye, mhlawumbi, umcwangcisi zincwadi zemali okanye omnye umntu othembekileyo ukufikelela kwakhe obekuqinisekisiwe ekuqaleni kwinkqubo yethu.
Abasebenzisi abangena kwinkqubo baqala ukujonga umfanekiso oqhelekileyo, kodwa inqanaba lokufikelela kwabo liyazihlula ngokwabo. Umzekelo, umphathi akanawo umda wemibuzo ngaphakathi kwenkqubo yabathumeli: unokujonga imbali yokwazisa egameni labasebenzisi, imisebenzi eyenziweyo, iingxelo zesishwankathelo, uhlalutyo kunye neenkcukacha-manani, kodwa akukho nanye yale mibuzo ifumanekayo kumsebenzisi oqhelekileyo . Ulawulo lwezifundo kunye nesoftware yokugcina irekhodi ivelisa ishedyuli ye-elektroniki kwaye iqinisekisa usetyenziso olunengqondo lwamaziko akho emfundo. Imagazini yokubakho iya kufumana indawo yayo kwinkqubo yekhosi. Ukugcina ireyithingi kuhlala kukhuthaza kakhulu kubasebenzi, kwaye ukuba ivulekile, iyabakhuthaza yonke imihla. Nje ukuba ungene kwinkqubo yolawulo ebathelekisa ngeeparameter ezahlukeneyo kwaye ubonise iziphumo ngexabiso lamanani, akukho titshala uhlala engenamdla, kwaye ke uzama ukukhuphisana, anyukele phezulu kwizikhundla eziphambili. Kwaye ukuba isikhundla esiphambili sivuzwa ngokubonakalayo ngamabhonasi emali, inkqubo yezifundo enamanqanaba ootitshala abaxabisekileyo iya kubulala iintaka ezimbini ngelitye elinye: iyakukhuthaza abasebenzi ukuba baphumelele kwaye ngokuzimeleyo bakhethe oyena mqeshwa ubalaseleyo bamnike ibhonasi efanelekileyo. Kwaye, ubalo lwemali yomvuzo ikwayinjongo yenkqubo yezifundo. Ngaba kulungile ukuba nomsebenzi ozimeleyo, owenza isabelo sengonyama seqela liphela? Ke ngokungxamisekileyo kufuneka ufake le nkqubo ibalulekileyo kwisixhobo sakho!
Inguqulelo entsha yenkqubo ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso ukuboniswa kolwazi kwitheyibhile. Makhe siqwalasele umzekelo wedatha yabathengi. Kukho indawo ethile yokubhaliweyo ote. Inolwazi olubalulekileyo olunokubonakala kumsebenzisi, kodwa lubanzi. Ngaphambili, intsimi ngokwayo ibifanele yolulwe ngandlela thile, ebingasebenzi kakuhle. Kwinguqulelo entsha, unokulawula ukubekwa kwamasimi kwitafile kungekuphela kwindiza ethe tyaba, kodwa nakwindawo emi nkqo! Konke okufuneka ukwenze kukubamba isikhombisi kwisikhombisi semouse kwaye usitsalele kwindawo elungileyo okanye wandise nje ukuphakama kwawo nawuphi na umhlaba. Ngoku unokwenza ngokulula itafile nganye ukuze ihambelane neemfuno zakho. Iintloko zingabekwa kwimiqolo eliqela, kwaye ukuphakama kwamasimi ngokwawo kunokutshintshwa ukugxininisa izinto eziyimfuneko. Ukuphuculwa kwesoftware eyongezelelweyo kongeza ukusebenza okutsha kwaye kwenza ukuba umsebenzi wakho kule nkqubo ube lula ngakumbi kwaye ube nemveliso. Ukwenza uluhlu etafileni ngeparameter ethile ngoku kukuvumela ukuba ubale ngokucacileyo amaxabiso. Ngoku awukwazi ukubona kuphela isixa sonke, kodwa nazo zonke iintlawulo zethutyana kunye namatyala. Inkqubo yezifundo ibala kungekuphela inani leerekhodi, kodwa kunye nenani lamaqela. Ungahlala ubona inani leekhrayitheriya ezizodwa nakweyiphi na isampulu. Cinga ngemeko xa ufuna ukugcwalisa iindawo ezithile, kodwa kunqabile kakhulu. Ngaphambili, bebehlala bengamehlo kuwe, kuba xa uhlela, inkqubo ibabonisa ngokupheleleyo, eyayisusa ingqalelo. Ngoku ungabandakanya la masimi anganyanzelekanga kwiqela elinye kwaye uwafihle ngonqakrazo olunye. Umzekelo, nantsi irekhodi yokuhlela irekhodi lomthengi. Masithi awufuni ukubona ulwazi loqhakamshelwano okanye icandelo elongezelelekileyo ngalo lonke ixesha-cofa nje kumgca wokudibanisa kwaye uya kufihlwa! Ifestile icwecwe ngakumbi ngaphandle kokuphulukana nokusebenza. Kukwenzeka okufanayo nakwifestile yokukhangela idatha. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi, ungandwendwela iwebhusayithi yethu esemthethweni. Apha ufumana lonke ulwazi oluyimfuneko. Ngaphandle kwalonto, ufumana ithuba elikhethekileyo lokukhuphela uguqulelo lwedemo lwasimahla lwenkqubo yezifundo eziza kukubonisa zonke izibonelelo ezinokuzisa kulawulo lweshishini lakho.
Ufundisiso kunye nezifundo
ukubalwa kwemali kootitshala
Ukwenza ingxelo kwiiklasi zamaqela
ubalo lweencwadi yobugqirha
Ukwenza iakhawunti ngezifundo zolwimi
Ukwenza i-accounting kwimfundo yamabanga aphantsi
accounting for ootitshala
Ukwenza ingxelo yexesha lesikolo
ukubalwa kwemali eyunivesithi
accounting kumaziko emfundo
ubalo lweziko labantwana
Ukwenza ingxelo yabantwana kwi-kindergarten
ukubalwa kwemali kwabafundi
Ukwenza i-Akhawuntingi zokuhamba kwabafundi
Ukwenza ingxelo yeziko loqeqesho
ubalo lweekhosi zoqeqesho
uqeqesho loqeqesho lokuzenzekelayo
Iinkqubo zekhompyuter zoqeqesho
Inkqubo yekhompyutha yeekhosi
Ulawulo lweziko lemfundo
Ulawulo lomsebenzi wemfundo
Ukuzoba amaxesha abekiweyo
Ukwenza ingxelo kwezemfundo
Inkqubo yolawulo lweziko lemfundo
Inkqubo yolawulo yeziko lemfundo
Inkqubo yokubala accounting
Inkqubo yemfundo ezenzekelayo
Ulawulo lwenkqubo yemfundo
Ishedyuli yeklasi yeqela
Ijenali yobalo-mali kwezemfundo
Ijenali yobalo-zincwadi esikolweni
Ijenali yobalo-mali lokufunda
Ijenali yokuphicothwa kwezifundo
Uhlalutyo lwenkqubo yokufunda
Ulawulo lweziko lemfundo yabasaqalayo
Ulawulo lweZiko laBantwana
Ulawulo lombutho wezemfundo
Ulawulo lweziko labasesikolweni
Iinkqubo zezifundo zemfundo
Inkqubo yokuphicothwa kwabafundi
Inkqubo yesikolo sokuqhuba
Inkqubo yesikolo sabantwana abancinci
Inkqubo yezifundo zexesha
Inkqubo yesikolo semodeli
Inkqubo yesikolo samabanga aphantsi
Inkqubo yeziko lobuchule babantwana
Inkqubo yeziko loqeqesho
Inkqubo yexesha elifanelekileyo
Inkqubo yezifundo zoqeqesho
Inkqubo yexesha lesikolo
Isoftware yokubakho accounting
Funda oomatshini abazihambelayo
Ulawulo lweziko loqeqesho